एडिसिभ सिमेन्टको उत्पादन नेपालमै ! Bizshala -
यसरी बाँडफाँड भो मध्यभोटेकोशीको आइपीओ, तपाईलाई कति कित्ता पर्यो ?
एनआइसीको साधारणसभाबाट १०% बोनस सेयरको प्रस्ताव स्वीकृत
एडिसिभ सिमेन्टको उत्पादन नेपालमै !
काठमाडौं । स्थायी तथा अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्दा इँटाको विकल्पमा प्रयोग गरिने इको प्यानलको जोडाइमा प्रयोग हुने एडिसिभ(adhesive) सिमेन्टको नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ । हालसम्म विदेशबाट आयात गरी प्रयोग भइरहेकोमा नेपालमै पहिलो पटक गोर्खा इको प्यानलले यो सिमेन्टको उत्पादन थालेको हो ।
यो सिमेन्ट इको प्यानलको जोडाइका साथै बाथरुम र किचेनका टायलहरु टाँंस्न प्रयोग गरिन्छ । इको प्यानलको जोडाइमा प्रयोग हुने यो सिमेन्ट अन्य सिमेन्ट भन्दा फरक हुन्छ । सामान्य सिमेन्ट भन्दा यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ(जोडाई क्षमता) मजबुत हुने भएकाले इको प्यानलको जोडाईमा यही सिमेन्ट आवश्यक पर्छ ।
उत्पादित सिमेन्ट प्रति बोरा ५० केजीको छ । यसअघि चीनबाट आयातित गरिआएकोमा अहिले बहराइनस्थित साझेदार कम्पनी अल खाजाको प्रविधि नेपालमा भित्राई यसको उत्पादन नेपालमै सुरु गरेको गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) इञ्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले बताए ।
भारतबाट आयातित प्रिफ्याब प्यानलहरुले ज्वाइन्टमा सिमेन्टको प्रयोग नगरे पनि गोर्खा इको प्यानलले यो सिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएको सिईओ दुवालले बताए । ल्याबमा पूर्ण परीक्षण पश्चात मात्रै यो सिमेन्ट बजारमा पठाउने उनले बताए । सकेसम्म अत्यधिक स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट यो सिमेन्टको उत्पादन थालेको उनले जनाए । एडिसिभ सिमेन्टको प्रयोगले इको प्यानलमा भएका टंङ्ग एण्ड ग्रुभको जोडाई मजबुत हुने उनले बताए ।
ल्यावमा परीक्षण गर्दा यसको कम्प्रेशिभ स्ट्रेन्थ ४० एमपीए रहेको जनाइएको छ जुन अन्य सिमेन्टमा भन्दा धेरै हो । यो एडिसिभ सिमेन्ट चाँंडो सुक्ने भएकोले काम गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
एडिसिभ सिमेन्टको उत्पादन थालेको गोर्खा इको प्यानल स्वदेशमै इको प्यानल उत्पादन गर्ने नेपालकै पहिलो कम्पनी हो । यो आईएसओ ९००१:२०१५ चिन्ह प्राप्त कम्पनी हो । ‘निर्माण सामाग्रीमा हरित क्रान्ति’ भन्ने नाराका साथ कम मात्रै प्राकृतिक श्रोतसाधनको प्रयोग गरी यो कम्पनीले स्वदेशमै निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले काठको विकल्पको रुपमा पूर्ण वातावरणमैत्री यूपीभीसीको झ्याल ढोकाहरु पनि उत्पादन गर्दै आएको छ ।
युनाइटेड सिमेन्ट्सको राजमिस्त्री तथा ठेकेदारलाई �
काठमाण्डौ । के.एल. दुगड ग्रुपअन्तर्गत युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रा. लि....
मैतीदेवीमा प्रान आरएफएलको अत्याधुनिक शोरुम
काठमाडौं । प्रान आरएफएल ग्रुपले राजधानीको मैतिदेवीमा गत मंसिर २७...
अचानक ब्याज बढेपछि निजी क्षेत्र पुग्यो गभर्नरलाई भेट्न, १८
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको...
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले...
नाम चलेका ५ सिमेन्टबाट बनेका भवन एकवर्षमै चुहिए, गुणस्तर
-चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा...
ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्र तर्सियो, सीमा कायम गर्न आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले बैंकहरुबीच...
निजी क्षेत्र र कर प्रशासन बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल, जित
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्र र कर प्रशासन बीचको मैत्रीपूर्ण फुटवल...
कृषिजन्य उद्योगमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निम्बसलाई सरकारको
काठमाण्डौ । पशुपन्छी दाना उद्योगमा अग्रणी कम्पनी निम्बसको...